Posted by Tranquillus | Feb 26, 2021 | Xirfadaha hadalka iyo qoraalka afka
Hingaadda khaladaadka shaqada waa inaan la fududeynin maxaa yeelay waxay saameyn xun ku leeyihiin xirfaddaada xirfadeed. Loo shaqeeyeyaashaada iyo dadka aad laxiriirto kuma aamini doonaan, taas oo yareynaysa fursadahaaga horumarka. Ma rabtaa inaad ogaato sida khaladaadka higaada shaqada ay u arkaan kuwa ku aqriya? Raadi maqaalkan.
Xukunka ugu horeeya ee ku soo dhaca maskaxda dadka ku akhriya waa adiga oo kaa maqan xirfado. Runtii, waa in la sheegaa in khaladaadka qaarkood aan la cafin karin oo aysan xitaa carruurta sii geysan. Natiijo ahaan, kuwani mararka qaarkood waxay si khaldan uga tarjumi karaan xirfad la'aan iyo caqli xumo.
Dareenkan, waxaa lagama maarmaan ah in la helo amar wanaagsan oo ku saabsan heshiiska wadajirka ah, heshiiska falka iyo sidoo kale heshiiska qaybtii hore. Intaa waxaa dheer, waxaa jira cilladaha ku yimaada caqliga saliimka ah iyo sidaas darteed garaadka. Dareenkan, ma ahan wax macquul ah inuu xirfadle qoro "Waxaan u shaqeeyaa shirkadda X" halkii uu ka qori lahaa "Waan shaqeeyaa…".
Dadka ku aqriya ee cilladaha ka hela qoraalkaaga waxay si otomaatig ah ugu sheegi doonaan nafsadooda inaadan aamin ahayn. Intaa waxaa sii dheer, iyadoo ay soo ifbaxday dijitaal, khaladaadka waxaa badanaa lagu mideeyaa isku dayga khiyaanada iyo khiyaanooyinka.
Marka, haddii aad dirto emayl khaladaad ka buuxo, wadahadalkaaga kuma aamini doono. Waxa laga yaabaa inuu xitaa kaa fekero inaad tahay qof xaasidnimo ah oo isku dayaya inuu khiyaaneeyo. Halka haddii aad ka taxadari lahayd inaad ka fogaato qaladaadka higgaadinta, waxaad ku kasban lahayd kalsooni buuxda. Khasaaruhu wuu ka sii weynaan doonaa haddii ay wehel u tahay shirkadda.
Dhanka kale, degellada ay ku jiraan khaladaadka waxay yareeyaan kalsoonidooda maxaa yeelay khaladaadkan waxay cabsi gelin karaan macaamiishooda.
Waa wax la fahmi karo in la sameeyo khaladaadka taxaddar la'aanta ah marka aad si fiican u maamusho sharciyada isku xirnaanta. Si kastaba ha noqotee, cilladahan waa in la saxaa inta lagu jiro dib-u-akhrinta.
Taas oo macnaheedu yahay xitaa markaad khaladaad gasho, waxaa lagaa rabaa inaad saxdo markii aad qoraalka saxayso. Haddii kale, waxaa laguu arkaa inaad tahay qof qalafsanaan ka muuqato.
Markaa haddii aad email ama dukumeentigaagu waxa ku jira khaladaad, waa calaamad muujinaysa dayacaad taas oo muujinaysa inaadan wakhti ku qaadan inaad saxdo. Halkan mar kale, kuwa ku akhriya waxay odhan doonaan in aanay macquul ahayn in la aamino qof aan adag.
Kuwa ku aqriyay waxay sidoo kale u maleyn karaan inaadan ku ixtiraameynin daryeelka ay u hayaan inay cadeeyaan fariimahaaga iyo dukumiintiyadaada intaadan dirin. Marka, qorista ama gudbinta dukumiinti ay ku dheehan tahay sicir ama qaladaad higaada waxaa loo qaadan karaa xushmad daro.
Dhanka kale, markay qoraaladu saxan yihiin oo hagaagsan yihiin, kuwa wax akhriya waxay ogaan doonaan inaad sameysay dadaalkii loo baahnaa si aad ugu gudbiso qoraal sax ah.
Higgaadinta khaladaadka shaqada: sidee ayay kuu arkeen kuwa ku aqrinaya? Febraayo 26, 2021Tranquillus
horeGelinta Territorial of France Relance: la qabsashada heshiisyada maalgashiga xirfadaha gobolka
socdaSababaha looga fogaado khaladaadka higaada shaqada